Iifayile ze-clamp factory, ababoneleli - i-china clamps abavelisi
Ucingo Pipe Hook
Njengomnye weendawo zokuxhoma ezikhuphisanayo zenkampani, amagwegwe ethu ombhobho wocingo afumene ukuthandwa okukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwaye i-vinyl-camera ls iyafumaneka.
UPC evunyiweyo ABS umhlwa Pro J-hook
Njengenye yezona ndawo zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, ii-J-hooks zethu zivunyiwe yi-UPC. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, uyilo lweembambo ezimbini lwenza ukuqiniswa kwezikhonkwane ngexesha lokuhamba ngokwendlela.
Umsebenzi wokuKhanya kwi-U-Strap
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, umthwalo wethu okhanyayo u-straps ufumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, izikhonkwane zethu zeenzipho zenzelwe i-1/2 ″ x 3/4, imibhobho ye-CTS. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika.
I-Cast Iron Pipe Clamp ngocingo oluKhawulezayo olunomphezulu oshushu
Njengomnye weendawo zokubeka ukhuphiswano kwinkampani, umbhobho wethu wesinyithi umbhobho uqinisa izibopho ezikhawulezayo ngomhlaba kwalenza zifumene ukuthandwa okukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.
Umsebenzi wokuKhanya kwi-U-Strap (Ukutyubhisha iCopper)
ifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho: i-Zinc ngumfanekiswana, i-epoxy kunye nokugqitywa okuluhlaza okuluhlaza ukuhlangabezana neemfuno zakho zokulwa nokubola.
Yakha Cast Iron Pipe uqinisa Copper ngumfanekiswana
Njengomnye weendawo zokubeka ukhuphiswano oluninzi kwinkampani, izibopho zethu zentsimbi zentsimbi zenziwe zenzelwe ukumiswa kwemibhobho yobhedu. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.